Horukon iyo qaabeynta group
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Horukon iyo qaabeynta group
In qabashada Horukon, waxaa la sheegay in ay u qaybiyeen Ghanna ah by kooxaynta mashiinka pachinko ee transformer ah. Sidaas daraaddeed, waxa la sheegay in wax ku ool ah in qabashada Horukon, waxaan doonayaa in aan arko nooca wax of xiriirka ka dhexeeya Horukon iyo kooxaha. Mashiinka Pachinko ayaa ku xiran by transformer ah si ay u helaan korontada ah.
in tiro in ku xiran yihiin ay transformer ee, loo yaqaan la soocay afar ilaa shan kooxood oo ka mid ah. Or ayaa noqotay koox tiro dhamaadka, ama waxa uu noqday koox ee dhinac-ilaa-dhinac tirada serial, waxa ay u muuqataa in ay xaqiiqada ah in labada la qaatay.
First of dhan, marka ay tahay wakhtiga aad rabto in aad soo bixiyey hit weyn, sida sharciga waafaqsan gaar ah, Horukon waa, Waxaan jeclahay fulinta xukunka Ghanna ah. Yimaado waqti dhacdo Ghanna u goostay, Horukon waa ku salaysan koox, inaan ka dhaansado kooxda in ay curiyaan hit weyn.
In kooxda in ku guuleystay, Ghanna bilaabo inuu dhici, kooxda dhexdeeda taas oo Ghanna ayaa la siiyay, waa in Ghanna muddo qaar soo baxa. Intaa waxaa dheer, in Horukon ah, si ay u kubad ka dhigi soo baxay qowladda pachinko oo dhan celcelis ahaan, heerka uu gaarsiisan dhacdo waqtiga iyo hit weyn in ay curiyaan hit weyn, ayaa la sheegay in la xakameeyo.
waayo, in, ama ka soo baxo waa eexda ah ee kooxda in Ghanna u badan tahay in ay dhacaan, in la saadaaliyo kooxda in hit soo socda waa weyn ku dhici doonaan, maxaa yeelay, Neraiuchi yahay qabashada Horukon ah.
sidoo kale u isticmaali nidaam sugida wejiga, halka ay doortaan qofka bixinta Ghanna ah, sidoo kale isla dhexmarayo gaad in samaynaya bakhtiyaa koox.